Okuhambayo Ukuze Strasbourg ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Okuhambayo Ukuze Strasbourg ngu zemininingwane
(Kugcine ukubuyekezwa On: 17/03/2020)
Lapho isihambi ukhuluma ngokuvakashela France, abantu abaningi obungenza kweso cabanga Paris. Nokho, France inhlokodolobha akulona idolobha kuphela kuwufanele ngokuvakashela kuleli zwe elihle, Ukuya Strasbourg yiyona IN entsha. kwezinye izindawo eziningi kukhona njengabafanelwe ukwazisa bonke langa zokungcebeleka kanye nakho banganikeza.
Strasbourg ungomunye walabo emadolobheni ukuthi sasikwazi ukujabulela ngaphezulu, kokubili ngenxa yobuhle balo nokuhlala Ngobuningi bezinto ukwenza khona. Ukuhamba ngesitimela Strasbourg kusukela emadolobheni amakhulu aseYurophu nizomthatha umoya wakho away. Ake ube sihlolisise indlela angahamba kuleli kumnandi uya khona futhi yini ungabona wenze khona:
Lapho Okuhambayo Ukuze Strasbourg Vakashela I Strasbourg Cathedral
Amasonto ababhishobhi kusukela enkathini ephakathi kuthiwa enchanting, iyesabeka futhi umane elimangalisayo ukuhlola. futhi lombhishobhi Strasbourg uvelele phakathi kwabo - ngokoqobo, njengoba sasivamise ukuba isakhiwo ezinde kakhulu emhlabeni kuze 1874! Ezinye izingxenye zalo usuku Kudala 1100, okuyinto isivumelwano kweqiniso ukuze esingakanani lokhu isakhiwo mlando iye emi. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ukuhlola ngaphakathi noma unamathele ogcina olungaphambili lwesonto, nithatha umxhwele.
Thatha izithombe Of La Petite France
Ukuhlehlela Emuva ku La Petite France azizwa cishe kufana nokuya emuva ngesikhathi. Nge izakhiwo bezitolo omnyama nomhlophe isigamu-izingodo embondelene esifundeni esetshenziswa kwazo ukuba nibe ngabakaJesu abathengisi bazo zonke izinhlobo, cobblestone ezitaladini, traditional zokudla, kungcono endaweni une ukuzwa. Thatha izithombe uzibone ezikhathini ezidlule eside.
EMarseilles ukuze Strasbourg Izitimela
Lyon ukuba Strasbourg Izitimela
Yenza lokho ezikuthandayo In The Local Cuisine
Ukuze izivakashi ukudla, kukhona ekhethekile gastronomical uswidi ukuba sampled lapho Ukuya Strasbourg: ukudla Alsatian, ezehlukile iwayini futhi ubhiya. Strasbourg ubusa Alsace esifundeni, lapho iwayini lingama varietal, futhi main ezimbili ukuzama kukhona Gewürtztraminer futhi Riesling. Ukubhangqa yokugcina nge carp pan okuthosiwe noma Choucroute garnie, zabuna Alsatian owaziwa, futhi sikujabulele yakho.
Cologne ukuze Strasbourg Izitimela
Lille, sokuthi Strasbourg Izitimela
Zurich ukuze Strasbourg Izitimela
Metz ukuze Strasbourg Izitimela
Take A Isikebhe Trip Duzane Strasbourg
Enye indlela enhle kakhulu yokulungisa ukuhlola Strasbourg nge ride isikebhe. Kuyinto ithuba elihle ukuze uhlole amanye amasayithi enhle kunazo zonke kuleli dolobha futhi ufunde mayelana nomlando wayo ngesikhathi esifanayo. Bangu amaningi isikebhe ongakhetha Ukugibela ongakhetha kuzo, futhi ungase uthole ambalwa imibono ngokuthi okuyinto ze-hotspot ukuvakashela olandelayo.
Strasbourg has ngobukhulu sesitimela eFrance, ngakwesokudla ngemva Paris. Ukufinyelela ke ngesitimela kuyinto kuqonde, futhi zithole ithuba ukuthatha ngesivinini isitimela TGV (isivinini sesitimela.) Kungathatha usuka Paris Strasbourg e kuphela 2 amahora 20 amaminithi, kunokuba senze ngendlela evamile 4 amahora ngemoto.
Lokho kusho ukuthi izikhathi zokuhamba kusuka kwamanye amadolobha eziyinhloko zaseYurophu futhi kakhulu emifushane. Uma uhamba ukuze Strasbourg kusukela Switzerland, Belgium, Netherlands, Germany, nakwamanye amazwe aseYurophu futhi amadolobha, ungathola ukuthi Strasbourg kalula futhi ngokushesha. Funa i ebusuku ukuxhumana uma Uku- isabelomali baqaphe ngoba labo amathikithi ngokuvamile eshibhile.
Ukulungele isikhathi zokuphila kwakho ukuhlola idolobha elihle Strasbourg? Ukubhuka amathikithi akho isitimela manje, futhi ujabulele kokubili uhambo futhi lapho uya khona.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-strasbourg-train/ - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#alsace #sncf europetravel strasbourg tgv trainjourney Tranride Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelfrance